Duurjoogtii ka qaxday dagaaladii sokeeye Soomaaliya oo bilowday inay dib ugu soo laabtaan |
somalipublic / September 17, 2015
Xayawaanada duurjoogta oo ka cararay dagaaladii sokeeye ee dalka Soomaaliya una qaxay dalka Kenya ayaa bilaabay toddobaadkan inay dib ugu soo laabtaan dalka Soomaaliya oo haatan dagaaladii ka qaboobeen.
Duurjoog noocyo kala gedisan leh oo ay ka mid yihiin libaaxyo,maroodiyo iyo xayawaano kale ayaa haatan lagu arkay deegaano kamid ah gobolada Jubooyinka kadib markii deegaanadii ay u carareen ee dalka Kenya ay ugaga soo carareen cabsi ka soo wajahday ciidamada Kenya oo howlgalo ka wado keynta deegaanada ku yaal gobolka Waqoyi Bari Kenya.
Degmada Badhaadhe ayaa kamid ah deegaanada lagu arkay duurjoog kala gedisan oo sanadihii la soo dhaafay laga waayay halkaas. Sida ay sheegayaan dadka ku nool degmada Badhaadhe duurjoogtan ayaa la arkayaa iyagoo raxan raxan u socda islamarkaana iska daaqaya keymaha ku yaal degmada Badhaadhe.
Dib ugu soo laabashada duurjoogtan oo lala xiriirinaya howlgalada ay ciidamada amniga dalka Kenya ugaga baadi goobayaan ururka Alshabaab keymaha Boni ayaa dadka ku nool gobolada Jubooyinka ay aad u soo dhoweeyeen.
Dalka Soomaaliya oo sanadihii la soo dhaafay isbedel uu ku yimid dhinaca ammaanka ayaa sidoo kale waxaa hore u bilaabay in dalkooda ay ku soo laabtaan boqolaal Soomaali ah oo u carartay wadamada aynu jaarka nahay iyo dalalka reer galbeedka ah.
September 17, 2015 in Wararka Maanta.
Hogaamiyihii afgambiga Burkino Faso General Diendere oo xabsiga loo taxaabay
← Khudbad uu Madaxweynaha Jubbaland ku Sharaxayay Musharaxnimadiisa Mar kale
Wiil Muslim ah oo caan ku noqday muddo kooban kadib markii la xiray →